अर्काकी श्रीमती खोस्ने अचम्मको मेला – Asal Kura
गृहपृष्ठ अर्काकी श्रीमती खोस्ने अचम्मको मेला
अर्काकी श्रीमती खोस्ने अचम्मको मेला
कस्तो अचम्मको परम्परा
संसारमा विविध भाषा र संस्कृतिका मानिस छन् र उनीहरुका आफ्नै परम्पराहरू छन् । आज हामी त्यस्तो परम्पराबारे चर्चा गर्दैछौं, जसअन्तर्गत पुरुषहरूले अर्काकी श्रीमतीलाई खोसेर लैजान पाउँछन् । र, समाजले त्यसलाई वैध ठहर गरेपछि विवाह गर्छन् ।
पश्चिमी अफ्रिकाको बोदाब्बे जनजाति समुदायका मानिसहरुले अर्काकी श्रीमती खोसेर विवाह गर्ने यस्तो परम्परालाई मान्दै आएका छन् । यो परम्परा उनीहरुको पहिचानसँग जोडिएको छ ।
परम्पराअनुसार युवतीको पहिलो विवाह घरका मानिसहरुले इच्छाअनुसार हुन्छ । तर, दोस्रो विवाहका लागि पहिले उनीहरुलाई कुनै पुरुषले खोसेर लैजानुपर्छ । यस क्षेत्रमा लाग्ने गेरेवोल मेलाका दौरान युवकहरू अनुहारमा विभिन्न रंग पोतेर आउँछन् र महिलाहरुलाई रिझाउँछन् । यसरी महिलाहरुलाई फकाइरहेका बेला उनीहरुका पतिले यो सबै देखेका छन् वा हैनन् भन्ने कुराको भने उनीहरुले हेक्का राखेका हुन्छन् । अर्थात्, पतिलाई पत्तो नै नदिई उनीहरुले महिलालाई फकाउँछन् । महिला राजी भएपछि उनीहरुलाई लिएर भाग्छन् ।
पछिल्लाे - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सर्वदलीय वैठक आव्हान
अघिल्लाे - कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीको कमाल, यसरी जोगाए पद
बिहान सपनामा यस्ता चिजहरु देख्नुहुन्छ भने तपाइको लागी निकै नै शुभ
कस्तो अनौठो शक्ति, जे बर मागे पनि पुग्ने ! पुग्न नसके एक शेयर अबश्य गर्नु होला !
यी राशिका मानिसहरुले पाउँछन् अद्भूत सुन्दर श्रीमती
जानिराखौँ : दाँत फट्टिएका मानिसहरुका यस्ता गुणहरु
यी ३ युवतीहरुलाई दिएका थिए सलमानले करोडौं मूल्य पर्ने कार ! [मूल्य सहित]